WAA MAXAY AASAASKA UGU WANAAGSAN EE AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO EE POLYCARBONATE - POLYCARBONATE
Ugu Weyn Ee Polycarbonate
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka noocyada kala duwan ee saldhigga ah ee aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate)
Guryaha Polycarbonate waxay muddo dheer u dhisteen tayadooda. Sababtoo ah dhismahoodu waa kala duwanaansho ee alaabooyinka ay ka kooban tahay, kharashka dhismaha iyo tayada. Si kastaba ha noqotee, ma fududa in la go'aamiyo saldhigga aasaasiga ah ee loogu talagalay rakibidda geedo daboolan ee polycarbonate. Sidaa darteed, waxaa haboon in la sahamiyo noocyada aasaasiga ah oo dooro midka kugu habboon.
Sida laga soo xigtay habka lagu saleynayo saldhigyada lagu koriyo waxaa loo qaybiyaa 3 nooc:
Ribbon. Waxaa lagu rakibay wareegga wareegga aqalka dhirta lagu koriyo. Inkasta oo qaab-dhismeedkii ugu wanaagsanaa, in la dhiso qaab-dhismeedka noocan oo kale ah muddo aad u dheer, habsocodkana laftiisu waa wax aad u badan.
Columnar waa dhisme ah tiirarka, alwaax iyo birta. Qaabka noocan oo kale ah waa sahlan tahay in la rakibo. Naqshadani waxay ku kacaysaa qiimo jaban. Taasi waa kaliya aqalka dhirta lagu koriyo waxaa laga yaabaa in ay qabaan kulayl la'aan, sababtoo ah saldhiggu waa mid aan la isku halleyn karin.
Pile waxay u fiican tahay xayawaan aan la isku halleynin ama dhagax ah, oo taageera culeysyada dhismayaasha culus. Si kastaba ha ahaatee, waa qaali.
Ma taqaanaa? Waqtigan xaadirka ah, dhismaha ugu weyn ee aqalka dhirta lagu sameeyo waa UK.
Mid ka mid ah fursadaha ugu haboon ee lagu dhisayo aasaaska aqalka dhirta lagu koriyo waa alwaax. Faa'iido
Saldhigga geedaha - Naqshad aad u iftiin iyo fudud ee shirka. Marka la eego isafgaradkiisa, waa sahlan tahay in la wareejiyo iyada oo lala socdo aqalka dhirta lagu koriyo, ama xitaa ka saarto oo la bedelo mid kale. Qalabka aadka u midka ah waa qiimo aad u jaban ee milkiilayaasha, sidaas darteedna waafaqsan xitaa haddii ay jirto xaalad adag oo macquul ah.
Nasiib darro, walxahan rotting iyo gabi ahaanba aan ciriiri lahayn cayayaanka oo sidoo kale si firfircoon u burburinaya. Nolosha taageerada alwaax waa mid gaaban - 5 sano oo kaliya, ama xitaa ka yar. Tani waxay u baahan tahay daryeel joogto ah oo dheeraad ah - waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo xal halis ah.
Ma taqaanaa? Markii ugu horraysay waxaa lagu dhisay 1240 dhismo magaalada Cologne. Soo dhaweynta sharaftii King William ee Holland ayaa ku soo bandhigtay qurux badan qolka wakhtigaas, oo ka buuxay ubax iyo geedo. Waxay dhacday xilliga qaboobaha. Abuuraha, Albert Mangus, Baaritaanka lagu eedeeyay sixirnimada.
Haddii geedku uu shaki ku jiro, ka fikir mowqif ahaan sida lebbiska. Faa'iido
Aasaaska lebiska ayaa leh suurtogalnimada dheer ee muddada dheer. Dhulku waa mid aad u fudud, waa mid lagu kalsoonaan karo oo deggan. Kharashka lebbiska waa mid hooseeya, sidaas darteed uma baahnid inaad lacag badan ku qarashgareyso dhismaha.
Inkasta oo xoogga alaabtu ay tahay, lebbiska ayaa wali ah si dhakhso ah ayuu u burburiyaa iyada oo laga eegayo saameynta jawiga dibadda. Dhismaha naqshad noocan oo kale ah waa waqti aad u badan, waqti badan ayuu qaadanayaa, taas oo macnaheedu yahay inay adag tahay in la dhiso keligiis.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo dhiso guriga kuleylka (polycarbonate) si loogu nasto.
Haddii aadan hubin haddii aad u baahan tahay aasaaska lebenka ah ee aqalka dhirta lagu koriyo, tixgeli fursadda dhagaxa. Faa'iido
Asaasiga dhagaxa wuxuu noqon karaa aasaas adag oo lagu kalsoonaan karo dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo. Si aad uhesho aasaaskii noocan oo kale ah wuxuu noqon doonaa mid aad u dheer mana u baahan doono bedel hore.
Inkastoo dhammaan faa'iidooyinka muuqda, maaddadu waxay ku kacaysaa qiimaha aad qaali u ah. Nidaamka koritaanka iyo rakibidda ayaa qaadan doona waqti dheer, sababtoo ah waxay qaadaneysaa waqti. Helidda qalabka dhismaha ee saxda ah sidoo kale waa mid aad u adag oo waqti qaadashada.
Waa muhiim! Waxay macno u tahay in la dhiso aasaaska noocan oo kale ah haddii aad haysatid aqalka dhirta lagu koriyo oo badan.
Waxay dhacdaa in dhagaxu aanu u muuqan mid ku filan. Kadibna wax kale waa la taaban karo. Faa'iido
The aasaasiga ah ee loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ka duwan farsamada rakibaadda fudud. Qiimaha aasaasiga ah ee dhamaystiran waa mid aad u hooseeya. Waxaad ka dhigi kartaa monolith ama meelo kala duwan. Asaaskani waa in loo isticmaalo dhulka, taas oo lagu garto qoyaan badan, sababtoo ah waxay siin doontaa aqalka dhirta lagu koriyo si fiican. Ogolaansho
Waa in loo isticmaalo kaliya haddii aad dhisatid dhisme sanado badan.
Si ka duwan aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu leeyahay qiyaas yar, dhisme fudud oo wuxuu u adeegaa inta badan guga - si loo ilaaliyo geedo jilicsan iyo geedo laga bilaabo qabow. Akhri haleelaha barafka "Snowdrop", "Breadbox", "Butterfly".
Blocks waxay noqon kartaa doorasho kale. Faa'iido
Dhismaha aqallada dhirta lagu koriyo waxay ku fiican tahay ciidda qoyan. Naqshadu waxay u adeegtaa wakhti aad u dheer iyo maalgashi faa'iido leh. Meelaha loo dhigo dhagaxyada waxay ku dhacaan jejeb waymo, taas oo ka dib markii la xoojiyo. Kadibna xuduudaha ayaa la dhigaa barkin la sameeyay isla markaana seerkuna waxay ku dhex jiraan iyaga.
Nidaam aad u qaali ah oo waqti dheer soconaya: aasaaska ayaa u baahan diyaarinta dheeriga ah. U qalma dhismayaasha ku meel gaadhka ah.
Haddii lagu dhibo ma aha oo kaliya qoyaanka, laakiin sidoo kale carrada jilicsan, markaas qashinka ayaa ku habboon. Faa'iido
Saldhig udubdhexaad ah ayaa u fiican gariir, carrada aan degganeyn, si ammaan ah u xaqiijineyso jiritaanka aqalka dhirta lagu koriyo. Goobta meel kasta oo qashin ah waa ul, ka dibna waxaa lagu buuxiyaa wax la taaban karo. Tani waxay abuurtaa xoog leh oo cajiib ah. Waxaa lagu xiraa ulaha iyo hagaajinta dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Waa muhiim! Meelahaas barafka ah ee ku xiran qaabka, hubi inaad go'doomiso.
Iskuday ulaha oo leh alaab taallo ah iyo dhadhan qadhaadh. Halka aysan jirin wax been ah, waxaa jira farqi. Daboolida farqiga waxaa lagu sameyn karaa wax walba oo aad doorato.
Waxaa kale oo lagu daraa qiimaha hoose ee burburinta naqshadeynta.
Xaqiijinta noocan ah aasaaska aad u shaqeynayaHadda waxaad taqaanaa waxa aasaaska u ah aqalka dhirta lagu koriyo (polycarbonate), guud ahaanna waxkastoo adiga kuu fiican, waxaad dooran kartaa nooca aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee ku saleysan doorbidkaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Polycarbonate 2019